Misy ny ecommerce sosialy?
Fifandraisana ara-tsosialy miaraka amin'i Moontoast
Zoma, Jona 8, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Miaraka amin'ny olona betsaka miankina amin'ny tambajotra sosialy sy bilaogy ho an'ny vaovao sy ny fanavaozana, ny fifantohana dia ny fampidirana mpanjifa sy mpanjifa mety amin'ny alàlan'ny media sosialy. Na izany aza, ho an'ny orinasa, ny fandraisana andraikitra toy izany na fananganana marika dia mijanona ho fampiharana foana raha toa ka tsy mandika vola fanampiny.
Midira Moontoast, ny sehatra varotra sosialy azo zaraina ara-tsosialy voalohany, mamela ny orinasa hiditra amin'ny olona amin'ny alàlan'ny media sosialy, mizara tranokala afovoany sy tambajotran-doka, ary hanome vola ny fifamofoana amin'izany miaraka.
Moontoast dia manana tolotra vokatra 3 (Avy amin'ny tranonkalany ny famaritana):
Fivarotana nozaraina - Ny magazay nizara an'i Moontoast dia fivarotana iray izay azo ampidirina ao amin'ny tranokala rehetra ary zaraina amin'ny tambajotra sosialy sy amin'ny alàlan'ny mailaka. Nanangana ny magazay nozaraina izahay mba hahafahan'ny marika, mpitendry mozika, mpanonta ary olo-malaza manitatra ny eCommerce azony amin'ny alàlan'ny fanolorana tolotra mivantana amin'ireo vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ny traikefa amin'ny fiantsenana sy fifanakalozana iray manontolo dia voarakitra ao amin'ny magazay, mahatonga ny fizotry ny fividianana haingana sy tsotra.
Fihetseham-po Moontoast - Moontoast Impulse dia rindranasa Facebook izay mamela ny mpankafy milalao, mizara ary mividy mozika avy hatrany amin'ny pejin'ny mpankafy Facebook. Ny fampiharana dia nentanin'ny aingam-panahy mizara tsena an'i Moontoast izay nampiasain'ny mpanakanto toa an'i Taylor Swift sy Reba hampitombo ny varotra an-tserasera. Miaraka amin'ny Moontoast Impulse izahay dia nanao fitaovana lehibe mitovy amin'ny mpanakanto rehetra. Vahaolana ara-barotra matanjaka sy matanjaka ary DIY ity.
Moontoast Analytics - Moontoast Analytics dia singa madiodio napetraka - tsy misy amin'ny sehatra varotra sosialy hafa - izay manome anao tombony eo amin'ny tsena. Manomboka amin'ny fijerin'ny vorona ny fironana sy ny lamina ankapobeny ka hatramin'ny fomba fijery amin'ny antsipiriany ny vokatra sy ny fonosana lafo indrindra, ity angona ity dia manome hevi-dehibe izay hanampy anao hanatsara sy hanatsara ny tolotrao vokatra - hahatonga azy ireo ho tiana kokoa, azo zaraina ary ahazoana tombony. Moontoast Analytics dia manala ny tombantombana amin'ny famaritana izay karazana tolotra manintona indrindra ny mpihaino anao.
Ny magazay nizara an'i Moontoast dia fitaovana iray ahafahan'ny marika mamorona sy mizara magazay an-tserasera manerana ny tambajotra sosialy, bilaogy, tambajotra doka ary tranonkala afiliana. Fa inona no mampiavaka an'io vokatra io amin'ireo vokatra an-jatony maro hafa izay amina tsena feno olona? Ny valiny dia miorina amin'ny safidin'ny fivarotana vaovao.
Ankoatry ny fivarotana sosialy mahazatra izay azo ampidirina amin'ny tranokala rehetra, ny PopUp Store izay mety amin'ny pejy fandraisana sy ny sora-baventy, dia mandika izay mety ho dokambarotra mipoitra hafa, ao anaty karatra fiantsenana. Ny fivarotana dokambarotra dia mamadika ny singa dokambarotra ho harona fiantsenana ihany koa. Ny safidy toy izany dia manome ny traikefa tsara indrindra ho an'ny mpanjifa satria tsy manelingelina ny hetsika fitetezana azy ireo izany na miditra amin'ny lalam-barotra.
Ny Moontoast Social Analytics Tool dia fitaovana tsara indrindra hamenoana ny tahiry toa izany. Miaraka amin'ity fitaovana ity, ny mpivarotra dia mahazo fomba fijery sarobidy momba ny fihetsiky ny mpanjifa, hanatsara ny tolotra ary hahatonga azy io tsy ho resin'ny mpanjifa kendrena. Toy izany koa, ny fitaovana dia manamora ny fanarahana fifanakalozana sy fifanakalozana, hamantatra ireo lamina sy fironana, mamela ny marika ho amin'ny fotoana sy toerana mety amin'ny tolotra mety. Ny fitaovana dia manampy amin'ny fandrefesana ny fiaraha-miasa ara-tsosialy, ny fanentanana ary ny fidiram-bola miaraka ary manampy ny marika handinika ny ROF na ny Returns avy aminy mpankafy.
Tags: Fivarotana nozarainamoontoastMoontoast AnalyticsFihetseham-po Moontoastfanadihadiana ara-tsosialyecommerce ara-tsosialyfanadihadiana momba ny ecommerce sosialy
Hubspot sy Hootsuite fampidirana